Mountain ashberry: kụrụ ma lekọta - Mkpụrụ ubi - 2020
Peculiarities nke ịzụ ryabyny ryabynistnogo, ịkụ na ilekọta ogige ahụ
Shrub ganes rybinobolistnyy - a osisi nke ọma na-eji na-ewu ewu hedges, na mgbakwunye, ọ nwere a kpọrọ akpọ ngosi showiness. Egwurugwu uzuzu bu ebe zuru oke n'ihi na ya mara nma ma obu ihe di nma. Otú ọ dị, ilekọta ya nwere àgwà nke ya.
Igwe ihe ọkụkụ na-emepụta maka uyi ugwu
Esi lekọta osisi osisi
Weeding na loosening
Uwe elu na fatịlaịza
Na-akwadebe ọrụ ubi maka oyi
Mountain ash rowan na nhazi ihuenyo
Siberia Neshaver hails si Asia (Korea, Japan, Far East, Northern China, Mongolia). N'ime ọhịa, ọ na-etolite na floodplains, ndagwurugwu na n'akụkụ mmiri. Shrub nwere aha ya maka nha nke akwukwo ya na akwukwo uzo ugwu. Ha na-arụkwa ọrụ, pinnate na paired veins.
Ị ma? Aha Latin nke osisi (Sorbaria sorbifolia) na-egosipụtakwa na ya yiri ugwu ash: ugwu ugwu na Latin - sorbus.
Osisi ahụ nwere ọtụtụ ndị nwere ezi osisi 1.5 cm nke dị omimi ma rute elu nke 2.5-3 mita. Osisi na-amalite na mmalite oge opupu ihe ubi ma na-adịgide ruo ọgwụgwụ nke October.
Ị ma? Mgbe epupụta nke ugwu ash na-acha oge ntoju, ha nwere agba pink-acha odo odo, ghọọ green green na n'etiti oge, na, na-amalite na September, gbanwee odo-acha uhie uhie.
Osisi shrub na-agba agba kwa afọ na-acha ọcha ọcha na ụdị panicles ruo 25 cm ogologo. Nke dayameta nke okooko osisi dị ihe dị ka 10-12 mm, ebe ogologo nke stamens dị ukwuu karịa ogologo nke petals, nke na-emepụta ihe na-adọrọ mmasị arụmọrụ. Ọsọ na-adịru site na abụọ ruo izu anọ. Mgbe okooko zuru ezu, a na-ehichapụ osisi, dị ka mkpụrụ nke uru a na-achọ achọghị.
Nke a na osisi shrub adịghị mma, n'ihi ya, onye na-elekọta ubi enweghị ihe ọ bụla na-akparaghị ókè n'ịhọrọ ebe ị ga-akụ ya: ma ebe anwụ na-acha na ebe ndị a na-acha ọkụ ga-adabara (dịka ọmụmaatụ, n'okpuru mkputọ osisi), ọ naghị echekwa banyere ala ala. Nhọrọ kachasị mma maka ịkụ ihe bụ loam nri na ala acidity nso na-anọpụ iche (pH 6-7).
Ọ dị mkpa! Nanị ihe achọrọ bụ mmiri ala: osisi anaghị anabata ụkọ mmiri ozuzo.
Osisi a na-agbasa nke ọma site na mkpụrụ osisi siri ike, mgbọrọgwụ osisi, na-ekewa ohia, mkpụrụ. Mkpụrụ site na mkpụrụ mụbara njọ - ọ ka mma iji nweta cuttings.
Osisi ubi ga-adị na mmalite oge opupu ihe ubi. Tụkwasị na nke ahụ, ikpuchi seedlings adịghị mkpa. I kwesịghị ịtụ ụjọ na ha ga-agbazekwa na mmiri frosts: ala nna nke shrub a bụ ihe siri ike, ya mere, ihe nwere ike ịbụ na osisi ga-agbanye mgbọrọgwụ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100%.
Tupu akuku, ị kwesịrị iji nlezianya nyochaa seedlings ma wepụ ihe mebiri emebi, akọrọ na ebelatawo alaka. Osisi ndị fọdụrụ dị mkpụmkpụ ruo 10-15 cm, na-ahapụ 2 ruo 4 buds na alaka ọ bụla. Ngwurugwu na-akwadebe ala na-emighị emeri, mana obosara (na-ewere ọnọdụ nke osisi).
Mmiri nke olulu kwesịrị ịdị ihe dị ka 30-40 cm, dayameta - site na 50 ruo 80 cm. Olulu ahụ jupụtara na mkpụrụ, nke nwere ala turf, humus na ájá dị 1: 2: 1. Ụra na-ehi ụra iji mepụta mkpọmkpọ ebe. Ha na-etinye mkpụrụ osisi n'elu, fesa ya na ala, mee ka ọ dị ụba na mulch na peat ma ọ bụ ogbugbo.
Enwere ike kụrụ ubi na mpaghara ndị nwere mkparị siri ike, mana ọ dị mkpa ịmepụta ogwe osisi ka mmiri wee nwee ike ịnọ na ya. Iji mee nke a, site n'akụkụ mkpọda ahụ na-egwu olulu miri emi, na-eme ka ohia dị obere obere ụlọ.
Dị ka e kwuru n'elu, okporo ámá adịghị ele mmadụ anya n'ihu, ọ dịghị achọ nlezianya anya, ma ọ ga-ekele maka ntakịrị nlebara anya, na-ekpughe na ịma mma ya.
Ubi ahihia anaghị anabata oge ọkọchị, ma ọ na-eguzogide mmiri na-eguzogide, ọ na-adị mfe imeri obere mmiri. Ya mere, mgbe ị na-agba mmiri ka ọ ka mma iji dozie ya karịa ịkpachara anya na ịkwa ụta n'ihi ohia mmiri. Ozugbo akuku na afọ mbụ nke ịṅụ mmiri na-abụkarị mgbe niile.
Na nlekọta ọzọ, mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ ezuola ugboro 2-3 n'ọnwa (na ọkụ, ikpo ọkụ, ọ bara uru na-eme ya ugboro ugboro). Ọ bụrụ na ìhè anyanwụ adịghị ada n'elu osisi (ma ọ bụ mgbe anyanwụ dara, ọ bụrụ na osisi ahụ dị na anyanwụ), ị nwere ike ịwụsa mmiri na epupụta - ọ na-amasị mmụba ka njọ.
A naghị eme ka a ghara ịkọwa ahịhịa ala maka ala ahịhịa ndụ, ebe o nwere usoro mgbọrọgwụ nke na-emeghị nke ọma. Afọ mbụ nke ndụ nwere ike inyere ya aka ịlụ ọgụ na ata, mgbe ahụ ọ ga-anagide onwe ya. Iji zere ihichapu ala, ọ bara uru ọtụtụ ugboro n'ọnwa mgbe ọ tọpụsịrị ogwe osisi ahụ iji gbanye ya na peat ma ọ bụ ogbugbo.
Ebe ọ bụ na shrub nwere mkpokọta green green, nke a na-emelite n'oge oge, ọ na-achọ nri mgbe niile. Ị nwere ike ịkwụsị nri mmiri: peat, humus, compost; Ịnwere ike ịgbakwunye ịnweta nri: carbamide (na mmiri, ihe dị ka 40 g / m2); potassium nitrate (ihe dị ka 15 g / m2); superphosphate (na mmalite nke ụbịa, banyere 40 g / m2).
Ọ dị mkpa! Ashberry adịghị anabata ikuku miri emi, ya mere, a na-eji nri ma ọ bụ na ịnweta eme ihe ma ọ bụ na-etinye aka n'osisi osisi ma ọ bụ na-emetụtaghị ala mgbe ala na-atọpụ.
N'afọ nke atọ, ọ bụ oge ịkwado. Nke mbụ, belata akọrọ, gbajie agbaji, ndị nwere ọrịa ma na-akpụ akpụ n'ala. Iji mechie, wepụ alaka ndị ahụ na-agafe ihe atụ nke shrub. A na-emezi isi edozi n'oge niile.
Mgbe ị na-eji shrub dị ka ogige, ọ ga-egbutu 3-4 ugboro kwa oge. Ke adianade do, ọ ga-adị mkpa ịṅa ntị na uto mgbọrọgwụ, nke na-eto eto, ogige ahụ pụkwara ịmịpụ.
Osisi a na-anabata ọbụna oké oyi, n'ihi ya ọ dịghị mkpa ka mkpuchi pụrụ iche.
Ọnụ ọgụgụ nke osisi ndị na-adịghị mma maka ogige gụnyere: spirea, chubushnik, viburnum, ọhịa ọhịa, forsythia.
Ugwu ash na-eguzogide ọgwụ na pests na oria. Mgbe ụfọdụ, akwụkwọ apịkalị na-acha akwụkwọ ndụ ma ọ bụ ọnyà ududo nwere ike ịhọrọ ya, mgbe ahụ, a na-emeso shrub ahụ na ngwọta Fitoverma ma ọ bụ Mitaka. Mgbe ụfọdụ, onye agha ugwu na-enweta mosaic nje. O di nwute, ọrịa a enweghị ngwọta, a ghaghị ibibi osisi ahụ emetụtara.
Iguzogide ntu oyi, nlepụ anya na iguzogide pests na-ekwe ka ojiji nke ahihia dị iche iche na ogige ntụrụndụ. Ha na-eji ma otu osisi na otu osisi, na-eji ya na osisi ndị ọzọ na-eme ya.
N'etiti osisi ndị dị na nhazi ihu ala na-ewu ewu: jasmine, osisi ọnyà, junipa.
Ot'odi, ekwesiri icheta na ahihia ahihia nwere ike igbasa akwukwo mkpuru osisi, kpochapu oghere ma wepu osisi ndi ozo. N'eziokwu, ụdị oge dị iche iche (dịka ọmụmaatụ, "Sam") na-emeri nsogbu a n'ụzọ ụfọdụ.
Ị ma? Akuku nke ahihia iji gbasaa mgbọrọgwụ ebe niile, na-enye ya uto, na-eji ike mgbada na ndagwurugwu.
Ugbo ahihia ndi ozo n'osimiri mmiri, karia n'oge ohia, adi nma. Tinye nke a shrub, ọ bụghị naanị na nhazi ubi, kama maka ngwa ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, a na-akụ ha na-ekewa okporo ụzọ n'okporo ụzọ ma ọ bụ n'àgwàetiti dị iche iche. Mountain ashberry bụ osisi, ihe dị mfe nke ịkụ na nlekọta nke nyere ya ịhụnanya nke ndị na-eme ihe ubi na ndị na-emepụta ebe obibi. Nke a shrub ga-atọ ụtọ anya site na mmalite oge opupu ihe ubi na mbubreyo mgbụsị akwụkwọ na richness na atụghị anya nke akwụkwọ agba, mma na ísì nke okooko osisi.